Daawo Wasiirka Maaliyadda oo markii ugu horeysay ka hadlay lacagtii la sheegay in xildhibaanada loo qeybiyey | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Daawo Wasiirka Maaliyadda oo markii ugu horeysay ka hadlay lacagtii la sheegay...
Daawo Wasiirka Maaliyadda oo markii ugu horeysay ka hadlay lacagtii la sheegay in xildhibaanada loo qeybiyey
Wasiirka Maaliyadda dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa markii ugu horeysay ka hadlay lacagihii loo qeybiyey xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya dhammaadka bishii Soonka.
Wasiirka Maaliyadda oo ka qeyb galayey Barnaamijka Dood Furan oo ay dadweynaha su’aal ku waydiinayeen ayaa kamid ah dadkii kasoo qeybgalay doodaadaas wuxuu Wasiirka Waydiiyey su’aal muhiim aheyd oo ah Waxa ka jiro in xildhibanada Baarlamaanka loo qeybiyey lacag aan aheyn middii mushaarka, hadidi Wasaaradda Maaliyadda lasoo marsiiyey iyo haddii uu isaga xataa lacagtaas wax ka qaatay maadaama uu kamid yahay xildhibaanada?
Wasiirka Maaliyadda Ducaaale ayaa arrintaas uga jawaabay inay tahay been abuur aan sal iyo baar midna laheyn.
Wuxuu ugu baaqay dadkii kasoo qeybgalay doodaas oo u badnaa arday inay iyaga baaritaan sameeyaan halkii ay sheegi lahaayeen warar ay ka maqleyn dad kale oo ku sugan fadhi ku dirirka sida uu hadalka u dhigay.
Wasiirka Maaliyadda ayaa sheegay inaysan jirin lacag la siiyey xildhibaanada isla markaasna aysan santuuqa Wasaaradda Maaliyadda ka bixi karin lacag aan lasoo marsiin Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inaysan xataa lacag siin dadka xafiiskiisa kusoo booqdo ee lacagaha waydiisto maadaama uu sheegay inaysan ku jirin heshiiska in lacag aan la ansixin la bixin.
Qaar ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horey u sheegay in la siiyey lacag ay ku sheegeyn inay tahay xaqqul ciid dhammaadka bishii Ramadaan ee lasoo dhaafay inkastoo wasiirka uu hadda arrintaas inkiray.
Lacagtaas la siiyey xildhibaanada ayaa la sheegay inay aheyd abaalmarintii kaga soo aaday mooshinadii meesha looga saaray Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo hadda ku sugan Magaalada Nairobi.